मस्तिष्क बाहिर निस्किएको शिशुको जन्म |
मस्तिष्क बाहिर निस्किएको शिशुको जन्म
प्रकाशित मिति :2016-02-23 09:48:46
पोखरा । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा तनहुँ साँघे घर भएकी मनमाया थापाले मस्तिष्क बाहिर निस्किएको र ठाउकाकाे विकास नभएको शिशुकाे जन्म दिएकी छन् । शिशुको ओठ र तालुको फाटेको छ, भने टाउको र हड्डीको पनि राम्रोसँग विकास भएको छैन । शिशुको भित्री दिमाग बाहिर निस्केको छ भने हात खुट्टा पनि असामान्य रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालकाका बाल रोग विभाग प्रमुख डा. रामचन्द्र बास्तोलाले जानकारी दिनु भयो ।
आफूले पहिलो पटक यस्तो अनौठो प्रकृतिको शिशु देखेको उहाँले बताउनुभयो । बास्तोलाले भन्नुभयो ‘यो असामान्य शिशु हो, शरीरका धेरै अंग अनौठो लाग्छन् ।’ शिशुको तौल ३.३५ केजी रहे पनि शारीरिक सुगठन र विकास असामान्य रहेको छ । शिशुको अहिले क्षेत्रीय अस्पतालको एनआइसियुमा उपचार भइरहेको छ । भित्री अंग बाहिर भएकाले संक्रमणले गर्दा लामो समय बाँच्ने संभावना कम रहेको बास्तोलाले जानकारी दिनु भयो ।
असामान्य प्रकृतिको शिशु जन्मनुको कारण मनमायाले गर्भवति अवस्थामा खानु पर्ने आइरन चक्कि क्याल्सियम, फोलिक एसिड, टिटि खोप नलगाएका कारण यस्तो प्रकृतिको शिशु जन्मिएको डाक्टरको भनाइ छ । यस सँगसँगै गर्भवति अवस्थामा पोषिलो आहारको अभाव , गर्भवति महिलाले पेटको बच्चाको ख्याल नगरी पेटमा असर पर्ने खालको काम गर्दा यस्ता प्रकृतिका शिशुको जन्म हुन सक्ने डा. बास्तोलाको भनाइ छ ।